ILAY MATY VOALOHANY | GAZETY_ADALADALA
ILAY MATY VOALOHANY
Posted on 28/01/2009 by gazetyavylavitra
Hisy ny fihaonan’ny TGV sy ny tariny eny amin’ny kianja 13 mai androany manomboka amin’ny folo.
Handalo eny koa ny vata mangatsiak’ilay mpianatra maty voatifitra teny Anosipatrana, alohan’ny hanaterana azy any amin’ny fasan-drazany any Antsirabe.
Raisin’ny TGV an-tànana daholo ny fikarakarana rehetra momba ny razana.
Hisy ny fotoam-pivavahana hatao eny ho fialan-tsasatry ny fanahiny. Ny nofony moa efa afa-tsasatra rahateo.
Enga anie ka tsy hitohy indray ny fandravàna sy ny fmotehana fananam-bahoaka.
Tsy aleo aza ve tehirizina ho an’izay hitondra eo irany e! Amin’izay tsy ho lany andro manangana lava izao. Mba ovay amin’izay ny fomba fanehoan-kevitra zalahy a! Fa ny olona sy ny mpivarotra moa no nanao inona anareo?
Filed under: fiaraha-monina, politika, tapatapany |
« ‘Mitomania ianao ry taniko’ Ravalomanana vs Rolland Ratsiraka »
Hery, on 28/01/2009 at 6:35 said:
Mampalahelo tokoa ny mahita an’ireo namoy ny ainy izay na dia efa maty aza dia toy ny latsaina amin’ny fanaovam-beloma azy eny amin’ny 13 mai. Toy ny milaza hoe fa naninona no nandeha teny Anosipatrana nefa i Andry aza tsy teny fa teny @ 13 mai?
Izay tokoa mantsy no nolazainy hoe « Tsofiko rano ianareo raha ho eny (amin’ny MBS Anosipatrana) fa izaho kosa hiverina eny @ 13 mai » (News2Dago). Dia sanatria ve lasa Kamikaze tsy fidiny ny tanora izay mbola vao 14 taona monja?
Ilay nitana basy tokoa ve no mpamono sa ilay naniraka ny olona hifanehitra amin’ny basy?
ikalamako, on 29/01/2009 at 11:56 said:
Fari-piainana vanona : izay no ilain’ny Malagasy.
Raha miaina tsara izy – tsy hoe manan-karem-be fa mba hitany ny sens-n’ny fiainany (vivre discrètement) dia mety tsy tenté handray izay vola nanirahana azy teny akory. Mety voatery naka mersenera efa za-draharaha izay naniraka azy teny. Saingy indrisy, ny fahoriana mahazaka maniraka. Velon’aina moa ianao, arahaba soa arahaba tsara, maty kosa moa ianao, mba efa nanao izay ho efanao ianao hanatsaratsara fiainana. Akory atao, io no tonga amin’ilay dikanteny adaladala hoe « boribory vetaveta » (cercle vicieux) ny ataon’ny andaniny sy ny ankilany.
Hanitra, on 29/01/2009 at 6:08 said:
Raha hendry sy mba manatsaina kely fotsiny ianareo dia ny mivavaka mafy no tokony hataonareo fa tsy mandrangitra adim-poko! Efa nataon’Andriamanitra ho iray i Madagasikara hatramin’ny nampisy azy, nahoana no tadiavinareo hozarazaraina sy hosaratsarahana? Fa an’iza moa i Madagasikara? Raha izay no valinteninao dia mieritrereta hoe mety ve ity zavatra ataoko ity sa tsia? Inona no mety ho vokany avy eo?
Efa ela ihany no nipetrahako taty andafin’ny ranomasina fa tsy mbola nanadino ny tanindrazako aho. Maharary ny fo raha mahita ny fanimbazimbana ny taniko, indrindra fa ny Malagasy iray rà amiko aho.
Ny manjo ny tany miady any Gaza sy Palestina aza efa tsy fidiny!!! Mba misaina raha mba misy rà Malagasy ihany ao anatinao ao!!!
Enga anie Andriamanitra mba hamongotra ny devoly izay rain’ny fampisarahana rehetra sy ny famonoana ao Madagasikara! Ny devoly tsy mba manam-pitiavana ka faly ny hamono foana.
avy amin’ny tompon’ny blaogy: Tsy dia mazava amiko loatra ny ‘ianareo’ sy ny ‘ianao’ ato anatin’ity hafatra ity. Na izany aza dia nasehoko ihany mba tsy hilazana ahy ho mirona atsy na aroa, na mnavaka an’itsy amin’iry.